* ခံစားချက်ဆိုတာ လှောင်ပိတ်ထားလို့မှ မရတာ *
သြကာသလောကကြီးဝယ် တွေ့ဆုံ ကြုံကွဲသမှု့ဟာ ဓမ္မာတာပေပဲမို့ ကျွန်ုပ်နဲ့ တွေ့ဆုံ ကြုံကွဲ ပိုးဟပ်တွေ အကြောင်း တစေ့တစောင်းကို အစဉ်သတိရလျက်
ပိုးဟပ် ( ၁)
ပိုးဟပ်ရဲ့အမည်သညာကား လူခါး ။ သူရဲ့ပိတောက်ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကနေ စတင်ဆုံဆည်း ခဲ့ရတယ် ။ ခင်မင်သူတွေကို အမြဲကျီစယ်
တတ်တဲ့သူ ၊ အကြောင်းအရာ တစ်ခု လေးလေးနက်နက် တွေးလေ့ရှိသူ ။ သူရဲ့ pen name လေးကို စိတ်ဝင်တစား စပ်စုမိလေတော့
` ဘ၀ဟာ ခါးတယ် ´
` အချစ်ဟာ ခါးတယ် ´
`ဒါကြောင့် ကျုပ်က ခါးနေတဲ့ ကောင် ´
လူခါးဆိုတဲ့ နာမည်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေး မှတ်ပါ အဆွေ။ ဆရာ ကြည်မောင်သန်းရဲ့ ( အာရှတိုက်ရဲ့ တစ်နေရာ ) ကို mode အပြည့်နဲ့ခံစားရွတ်ဆိုသွားလေသူ ။ ကျွန်ုပ်တို့ ဆုံတွေ့ခဲ့ပုံကို အနှီပိုးဟပ်က မှတ်
ငါ မင်းကိုခေါ်တဲ့ဖုန်းတစ်ကောလ်နဲ့မင်းငါ့ကိုခေါ်တဲ့
ဖုန်းတစ်ကောလ် ။ အဲဒါ ငါတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ထုံးပဲ။
တွေ့ ခဲ့ကြတယ်။ မင်းနှစ်ဆယ့်ကိုး။ ငါ နှစ်ဆယ့်ရှစ်။ လူဖြစ်စ။
ဒါပဲ။သူပဲ။ကဗျာပဲ။ငါတို့ နှစ်ယောက်ကိုချိတ်ပေးတာ ကဗျာပဲ။
မီးခိုးငွေ့ တွေဟာငယ်စဉ်တောင်ကျေးကတည်းကမင်းရဲ့ မကျက်သေးတဲ့အနာတွေ။
သေသူမှာ အသက်ရှူရပ်တော့ ရှင်သူမှာ အသက်ရှူ ကျပ်ရတယ်။
လွမ်းမောခဲ့ရပါတယ် ။ ကွာလာလမ်ပူကမ်းက ဒုတိယမြောက် လက်ပြနှုတ်ဆက် ထွက်ခွါသွားလေသူ ။ လွမ်းမောခဲ့ရတဲ့ နေ့များပါပဲ။
ပိုးဟပ် ( ၂ )
လမ်းလျှောက်ရင် လိမ်ကျစ်လိမ်ကျစ်နဲ့ ၂၀ ကျော်အရွယ် ဂျစ်တစ်တစ်လူငယ်တစ်
ဦး ။ ရင်ဘက်ချင်း အပ်မိကျတော့ အတွင်းသား နူးညံ့လေသူ ။ စကားပြော မာန်
ပါပါ ရွတ်ဆိုမှု့ ဟန်ပါပါနဲ့ ( မဲခေါင် ) ကဗျာကို ရွတ်ဆိုသွားလေသူ
` ငါလာပြီ မဲခေါင် ´
ကျောထဲထိ စိမ့်ဝင် ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်း ထလောက်ပါပေရဲ့ လင်းလက်တာရာ။
ကျွန်ုပ်ကို တူတူပုန်းပြီး ချက်တင်မှာ ဆယ်ကျော်သက် ပိုးဟပ်မလေးတွေနဲ့ ဖလမ်း
ဖလမ်းထနေတဲ့သူ ။ ရင်ဘတ်ချင်း လင်းပွင့်ခဲ့ရတဲ့ အရောင်တစ်ခု ........
တောင်ကုန်းစိမ်းစိမ်းပေါ်က မျှော်ကြည့်နိုင်မှ မဟုတ်ဘူး
အဆင်မပြေမှုတွေကို ရှုခင်းလေးတစ်ချပ်လို တွေးကြည့်
စိတ်ကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးနဲ့ ဖိမထားနဲ့ 
ကျွန်တ်ာတို့ ကစားနေတဲ့ အဝေးကွင်းက အလင်း နည်းနည်းမှုန်တယ်
အနုပညာကို နေ့ တိုင်းသတိရပါ
ကဗျာကို ခါးဝတ်ပုဆိုးလို မြဲပါ
စာ ကဗျာ ဖန်တီးမှု့အားကောင်းကောင်းနဲ့ ကွာလာလမ်ပူကမ်းကို နှုတ်ဆက်သွားခဲ့ ပြန်လေပြီ ။
ပိုးဟပ် ( ၃ )
တတိယမြောက် ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ ပိုးဟပ် ၊ ရာဇာမျိုး ( အင်းကုန်း ) ။
( ၀ဲအစွန် သုံးယောက်မြောက် လွယ်အိတ်လွယ် )
အသားညိုညို အရပ်မြင့်မြင့် အညာသားတစ်ဦးနှယ် ။ လောကမှာ
လုပ်သလို မဖြစ်ရင် ဖြစ်သလို လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အမာခံ စိတ်ဓါတ်ပိုင်ရှင်
မျိုး ။ မည်သည့် ကိစ္စမဆို ရင်ထဲမထားတတ် ၊ စိတ်ကို ယမကာနဲ့ နူး
ညံ့မှု့ ပေးလေသူ ။ ဆရာ ယမုံရဲ့ ( နာဂစ် ) ကဗျာကို လက်တန်း ခံစား
ရွတ်ဆိုသွားလေသူ ။ နားထောင်နေတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ မိုးသက်လေ
ပြင်းတွေ အထပ်ထပ် ၊ယူပါ ကယ်ပါ ဆိုတဲ့ အနိဌာရုံ မြင်ကွင်းမျိုးတွေနဲ့ ကိုယ်တိုင် နာဂစ်ထဲ ရောက်ခဲ့
သလို ။ သူများကဗျာတွေ ခံစားမှု့ကောင်းကောင်းနဲ့ ရွတ်ဆိုခဲ့သလို ကိုယ်တိုင်လည်း ခံစားမှု့ ကဗျာ
လေးတွေ ရေးခဲ့တယ် ။ ရင်ထဲ ရှိနေတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် .......
ကျွန်တော် အိမ်ပြန်သွားပါပြီ။ ။
ကွာလာလမ်ပူကမ်းကို စတင်စွန့်ခွါသွားလေသူကြီး ။ အာရှတိုက်ရဲ့တစ်နေရာက ပိုးဟပ်တစ်ကောင်
ပိုးဟပ် ( ၄ )
ဆံပင်ရှုပ်ပွပွ ၊အသားညိုညို အမြဲတန်း ညစ်ညူးနေတတ်တဲ့ အသွင်အပြင် ရှိသူ ။
ဘောင်းဘီကျပ်ကျပ် ဘ၀ကျပ်ကျပ်နဲ့ လတ်ဆတ်ခဲ့တဲ့ သူ့အတွေး သူ့အရေး။
ဆရာ စိုင်းဝင်းမြင့် ရဲ့(မိသားစု) ကဗျာကို အသံနေ အသံထား အနိမ့် အမြင့်
လမ်းနဲ့ သွေးသားတော်စပ်တယ်လို့ ထင်တယ်
ငါ့မိသားစုမှာ ငါဟာ မလင်းတဲ့မီး
ငါ့မိသားစုမှာ ငါဟာ မလဲုခြုံတဲ့ထရံ
ငါ့ကြိုးကို တီးခတ်လိုက်တိုင်း အသံကြောင်ထွက်တယ်
ငါ့မိသားစုမှာမိုးယိုပေါက်လေး တစ်ပေါက်ရှိနေတယ် ဆိုရင်လည်း
မအောင်မြင်တဲ့ ဘောလုံးအသင်းဟာ ငါ့ မိသားစုပဲ
ကဗျာဆုံးလေပြီ ၊ အနှီပိုးဟပ်ရဲ့ဈာန်က ကဗျာထဲ စီးဝင်ပြီး တစ်ခုခုကို မကျေနပ်သလို မလှုပ်မယှက် ။
ကျန်တဲ့ပိုးဟပ်တွေ မျက်တောင်မခတ်တမ်း စိုက်ကြည့်နေကြချိန်မှာ ပ၀ါမကူ ရေမကူပါပဲ ဘီအီးတစ်
လုံးကို တစ်ကျိုက်တည်း မော့သောက်ပစ်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လိုက်ကျော် ဆူးရဲ ။
` သစ္စာမရှိဘူး .... သစ္စာမရှိဘူး ´
သတိရတိုင်းပြောပြောပြီးခံစားချက်တွေ အန်ချခဲ့တဲ့သူ ။ အသဲခွဲခဲ့တဲ့ ပိုးဟပ်မလေး မှမရရင် ကဗျာနဲ့
ပဲ အိမ်ထောင်ပြုမတဲ့ .........
သြော် ....... လွမ်းမောရပါရော......ဆူးရဲ ............. မူးလဲရယ် ။
ပိုးဟပ် = poet
Posted by mgyemin at 08:46 No comments:
နဖူးမှာမတို့လိုက်တဲ့ ပြာတစ်တို့ရဲ့ နောက်ကွယ်
အရာအားလုံးပြီးသွားပေမယ်လို့ တစ်ချို့က အခုမှစတယ်။ သွားနှင့်တဲ့သူကို အကောင်း ဆုံး လိုက်ပါပို့ဆောင်လို့ ပြန်လာတဲ့သူတွေက ပြန်လာကြတယ်။ တစ်ချို့အတွက်တော့ ဇာတ်လမ်းက အခုမှစတယ်။
မခင်တင့် တစ်ယောက် အလုပ်တွေရှုပ်နေတယ်။ အိပ်လို့တောင်မပျော်ဘူး။ နက်ဖြန်ခါကျရင် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားရင်း နဖူးပေါ်လက်တင်တော့ ပက်လက်၊ လက် ပေါ်နဖူးတင်တော့ မှောက်ရက်ဖြစ်လို့နေတယ်။ အစီအစဉ်တွေလည်း ခေါင်းထဲမှာ ပြည့် နှက်လို့နေတယ်။ နောက်ဆုံးမျက်စိကိုစုံမှိတ်ပြီး စိတ်နှလုံးဒုံးဒုံးချလို့ ငါကကောင်းစေချင် တဲ့စေတနာနဲ့ လုပ်တာပဲလို့ တွေးရင်းနဲ့ပဲ ညတစ်ညကို ကုန်ဆုံးစေလိုက်တယ်။
မနက်မိုးလင်းချိန်မှာတော့ မခင်တင့် က သူ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်တယ်။ လူနိုင်ဖြစ်တဲ့ အစ်မလတ်ရဲ့ယောက်ျား ခဲအို ကိုမောင်နိုင်နဲ့ တူအငယ်ကောင်ခေါ်ပြီး သေလို့မှရက်မ လည်သေးတဲ့ အစ်မကြီးအိမ်ကို သွားတယ်။ အိမ်လည်းရောက်ရော၊ တံခါးခေါက်ကြည့် တော့ အတော်ပဲဖြစ်သွားတယ်။ လောလောလတ်လတ် မုဆိုးဖိုဖြစ်နေတဲ့ အစ်မကြီးရဲ့ ယောက်ျားက အိမ်မှာရှိမနေဘူး။ တူအကြီးကောင်ကပဲ တံခါးလာဖွင့်ပေးတယ်။ တူတွေ ကတော့ အကြီးကောင်ကကိုးတန်း၊ အငယ်ကောင်က ခုနှစ်တန်းပဲရှိသေးလို့ သူပြောသမျှနာခံရမှာပဲ။ ဒီလိုနဲ့ ဟိုအကြောင်းပြော၊ ဒီအကြောင်းပြောရင်နဲ့ပဲ မခင်တင့်က သူ့အလုပ်ကိုသူစတယ်။
ပထမဦးဆုံးအိပ်ခန်းထဲဝင်တယ်၊ သော့ခတ်ထားတဲ့ဗီဒိုကို တူအကြီးကောင်ဆီက သော့ယူပြီးဖွင့်တယ်။
ထမ်ီတွေတွေ့တော့ သားတို့မိန်းမယူရင်ဝတ်ဖို့ အဒေါ်ကြီးသိမ်း ထားပေးမယ်ဆိုပြီး ယူလာတဲ့ ဆာလာအိတ်ထဲထည့်တယ်။
“ခြေထောက်က တစ်ယောက်တစ်ယောက် ဆိုဒ်မှမတူတာ။”
“ဪငါတူတွေနဲ့ တုံးလိုက်တာ ခြေထောက်ကကြီးနေတော့ ခြေထောက်ကို လှီးပေါ့၊ ဖိနပ်ကကြီးတော့လည်း ဖိနပ်ပေါ့။ ဒါများဘာခက်တာလိုက်လို့။”
“ဒါက သြကြီး(သေသွားတဲ့အစ်မကြီးနဲ့ မခင်တင့်တို့ရဲ့မောင် အငယ်ဆုံး) မင်္ဂလာဆောင်တုန်းက အဖွားက သူ့သမီးလေးယောက်ဝတ်ဖို့ဆိုပြီး တစ်ယောက်တစ်ထည် ဆင်တူ ဝယ်ပေးတဲ့ ချိတ်လုံချည်တွေမှတ်လား။”
“အေးလေ။ နင်တို့၊ ဖိုးစည်(အစ်မလတ်နဲ့ အခုခေါ်လာတဲ့ ကိုမောင်နိုင်တို့ရဲ့သား)တို့ မိန်းမယူရင် ပြန်ပေးမှာပေါ့။ ကိုယ့်အဒေါ်က မတရားလုပ်ပါ့မလား ၊ နောက် အိသဲ(မခင်တင့် ရဲ့ နောက်ထပ်အစ်မလတ်တစ်ယောက်က မွေးတဲ့သမီး) ကြီးလာရင်လည်း တစ် ထည်ပေးရဦးမှာ။”
“ပုသိမ်ထီး၊ ပုသိမ်ထီး။ ဒါကရော ကျွန်တော်တို့မိန်းမအတွက်ပဲလား။ ကျွန်တော်တို့ မိန်း မတွေက ပုသိမ်ထီးတော့ ဘယ်ဆောင်းမှာတုန်း။”
“ဟဲ့… ဒါက အိသဲအတွက်ဟဲ့။”
“ဟင်… အိသဲက အခုပဲ ၆တန်း၊ ၇တန်းရောက်နေပြီ။ နောက်ပြီးတော့ ဒေါ်ကြီးတူမက ပဲကလည်း ခပ်များများနဲ့။ ဒါကြီးဆောင်းပါတော့မလား။ အိမ်မှာတောင် ဘယ်သူမှ မဆောင်းလို့ ဒီအတိုင်းအလှထား ထားတာကို။”
“ဆောင်းဆောင်းမဆောင်းဆောင်း သိမ်းတာတော့ သိမ်းထားရမှာပဲ။”
“မိတ်ကပ်ဘူးတို့၊ ရေမွှေးတို့၊ အလှပြင်ပစ္စည်းတို့ဗျာ။”
“တခြားလက်ဝတ် လက်စားတွေကတော့ ထားပါတော့။ အမေဆေးကုတာနဲ့ပဲ ကုန်သ လောက်ရှိနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အမေသေတုန်းက ဝတ်ထားလို့ ပါရဂူဆေးခန်းမှာ အ လောင်းကနေ ချွတ်ပေးလိုက်ရတဲ့ နားကပ်ကော။ အဲဒီတုန်းက အဖေကြီးတို့တောင် ပူ ထူနေပြီး သတိမရကြလို့ ဆေးခန်းက နပ်စ်မကလေးက ချွတ်ပြီးပေးလိုက်တာလေ။”
“အဲဒါလည်း ငါကနင်တို့အဖွားအိမ်မှာ သိမ်းပေးထားတယ်။ နင်တို့မိန်းမယူရင် နင်တို့ မိန်းမတွေကို ပေးမှာပဲ။”
“ဒါပေမယ့် နားကပ်က တစ်ရံတည်းလေ။ တစ်ယောက်တစ်ဖက်ဆီ ပန်လို့မှမရတာ။”
“အေးလေ ရောင်းပြီး နင်တို့ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် ပြန်ခွဲပေါ့။”
“ဟောဗျာ ကျွန်တော်တို့က နားကပ်တစ်ရံအတွက်နဲ့ မယူမနေရမိန်းမယူရမလို ဖြစ်နေ ပြီ။”
“မရဘူး နင်တို့မိန်းမယူမှ ငါကပြန်ပေးမှာ။ အခု ငါသိမ်းထားမယ်။”
ဒီလိုနဲ့ပဲ ညနေလည်းစောင်းရော ဆာလာအိတ်သုံးအိတ်အပြည့် အဝတ်အစားတွေနဲ့ တိုလီမုတ်စတွေ ပြည့်သွားပါတယ်။ အဲဒါတွေကိုသယ်ပြီး ဘတ်စ်ကားစီးပြီးတော့ အိမ် ပြန်လာကြတယ်။ ပစ္စည်းတွေကိုတော့ ကိုမောင်နိုင်ကထမ်းပေါ့။ ည၈နာရီ၊ ၉နာရီလည်း ရောက်ရော၊ တူအကြီးကောင်က အိမ်ကိုပေါက်ချလာတယ်။ အိမ်အပေါ်ထပ် ထပ်ခိုးကို ဝုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ပဲ တစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ တက်သွားတယ်။ အဖွားအိမ်ပဲ၊ သူက လည်းဒီလိုပဲလာနေကြမို့လို့ လူကြီးတွေက သိပ်တောင်ဂရုမစိုက်မိကြဘူး။ နောက်မှ ထပ်ခိုးပေါ်ကနေ တဟီးဟီးနဲ့ငိုသံကြားလို့ အိမ်မှာရှိတဲ့သူအားလုံးက ထပ်ခိုးပေါ်ကို လိုက်တက်သွားကြတယ်။ အပေါ်ထပ်ရောက်လို့ ကြည့်လိုက်တော့ အကြီးကောင်ကြီး က တရှုံ့ရှုံနဲ့ငိုနေတာတွေလို့ မခင်တင့်မောင်အငယ်ဆုံးကပဲ၊
“သားကြီးရေချမ်း၊ ဘာဖြစ်တာလဲ၊ သြကြီးကိုပြော”
လို့ မေးပေမယ့်လို့ ဘာမှပြန်မဖြေဘူး။ ငိုပဲငိုနေတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဖွားအေလုပ်တဲ့သူကပါ မနေနိုင်လို့ ဝင်မေး တော့မှ
“မနက်ကအဒေါ်ကြီးက အိမ်ကအမေ့ပစ္စည်းတွေကို ယူချသွားတယ်။ အဖေကြီးလည်း ပြန်ရောက်လာရော၊ မင်းတို့အမေပစ္စည်းတွေဘယ်ရောက်ကုန်လဲလို့ မေးတော့ အဒေါ် ကြီးယူသွားတယ်လို့ သားတို့ကပြန်ဖြေတာကို အဖေကြီးက ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို သူနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပဲနဲ့ ယူသွားပေမယ့်လို့ ငါခွင့်လွှတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် အမေကြီးကိုင်နေကြ ဆလင်းဘတ်အိတ်ကို ယူသွားတာတော့ အမေကြီးမသေခင်က တမြတ်တနိုးသုံးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းမို့လို့ မကျေနပ်ဘူး။ ယူတဲ့သူကို ငါသတ်မယ်လို့ ဓါးကြိမ်းကြိမ်းပြီး ကျွန်တော်တို့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ကို ဆူနေလို့ ကျွန်တော်အိမ်ကနေ ထွက်လာတာ”လို့ ဖြေရှာတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ မခင်တင့်ရဲ့မောင်က မခင်တင့်ကိုဆူပါလေရော။
“အပျိုကြီးရယ်၊ နင်ကလည်း ဦးဏှောက်မရှိတာ၊ သူ့မိန်းမပစ္စည်း သူ့မိန်းမသေရင် ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူက ပိုင်တာပဲ။ သူ့စိတ်တိုင်းကျ သူ့ဖာသာသူစီစဉ်မှာပေါ့။ နင်က မမေးမမြန်းပဲနဲ့လုပ်တာကို။ သွားပြန်ပေးလိုက်။”
မခင်တင့်ကတော့ မျက်လုံးကလေး ကလယ်ကလယ်နဲ့ ငြိမ်ပြီး နားထောင်နေလိုက်တယ်။ သူကလည်း အမှားလုပ်ထားတာကိုး။ ဒါပေမယ့်လည်း ပစ္စည်းတွေကတော့ ပပထူတာတောင် မထချင်တဲ့ပုံနဲ့ နေရာမရွေ့ပဲ မခင်တင့်ရဲ့ဗီဒိုထဲမှာ ခန့်ခန့်ကြီးနဲ့ဆန့်ဆန့် ကြီး နေနေကြတော့တယ်။
မောင်နှမငါးယောက်ထဲမှာ အကြီးဆုံးဖြစ်လို့ အစ်မကြီးအမိရာနဲ့ စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့သူ လည်းဖြစ်၊ ဆွေတွေမျိုးတွေကြားထဲမှာလည်း သမာသမတ်မျှတတဲ့ ဦးစီးဦးဆောင် ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် အားလုံးကချစ်ခင်လေးစားကြတဲ့ အစ်မကြီး ကွယ်လွန်သွားခြင်း လေးနှစ်ပြည့်တဲ့အတွက် အစ်မကြီးအတွက် ရည်စူးပြီး ဆွမ်းကျွေးအလှူ လုပ်ကြတယ်။ ကိုယ့်အိမ်ရှိ မိသားစုတွေနဲ့ပဲ နည်းနည်းနဲ့ကျဲကျဲ ဝိုင်းလိုက်ကြတယ်။ အဲဒီ အလှူကို အစ်မလတ်နဲ့ သူ့အမျိုးသားကိုမောင်နိုင်တို့လည်း လာတယ်။ ဆွမ်းကျွေးပြီးတော့ လူတွေအလှည့်ပေါ့။ အားလုံးလည်း စားပြီးသောက်ပြီးရော ပြန်တဲ့သူတွေက ပြန် ကုန်ကြတယ်။ ပန်းကန်တွေ၊ ခွက်တွေဆေးရင်းကြောရင်းနဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့အစ်မလတ်ကိုတော့ သူ့အမျိုးသားက စောင့်ကျန်နေခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ မုဆိုးဖိုဖြစ်နေတဲ့ ဦးချစ်ကပဲ အိမ်ရှေ့ဝရံတာကို ခေါ်သွားပြီးတိုင်ပင်တယ်။
“မောင်နိုင်ရာ၊ ငါလည်းပဲ။ အသက်မငယ်တော့ဘူး။ မင်းတို့အစ်မကြီးလည်း ဆုံးတာ လေးနှစ်လောက်ရှိပြီ။ ငါ့မှာလည်း ဆေးပေးမီးယူ အဖော်တစ်ယောက်တော့ လိုတယ်ကွာ။ ကလေးတွေလည်း မအေမရှိတော့ အနည်းအများဆိုသလို စိတ်လေပြီး ပျက်စီးတာတော့ရှိတာပဲ။ အိမ်မှာလည်း ငါတို့သားအဖတွေအတွက် ချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့၊ လျှော်တာ ဖွတ်တာလုပ်ဖို့ ကူဖော်လောင်ဖက် မိန်းမသားတစ်ယောက်တော့လိုတယ်ကွာ။ အဲဒါနဲ့ ငါလည်း မယားညီအစ်ကိုဖြစ်ရုံတင်မက၊ မင်းတို့အစ်မကြီးရှိတုန်းကတည်းက ညီအစ်ကိုလိုဖြစ်နေလို့ မင်းကိုထုတ်ပြီး တိုင်ပင်တာပါ။”
“အင်း......ဟုတ်တာပေါ့၊ ဦးချစ်ရာ။ ဦးချစ်နောက်အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုလည်း အပြစ်ပြောစရာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ မရှိဘူး။ နောက်ဦးချစ် အစ်မကြီးရှိစဉ်က အိမ်ထောင်ဦးစီး တာဝန်ကို ပြည့်ပြည့်ဝဝထမ်းဆောင်ခဲ့တာပဲ။ ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်။ အစ်မကြီးနဲ့ ကလေးတွေက ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ လိုက်ပြတာ၊ ကလေးတွေက ရုပ်ရှင်ကြည့်နေပေမယ့်၊ ဦးချစ်က ခုံပေါ်မှာထိုင်ရက်ကြီး အိပ်ပျော်ရင်းနဲ့ ဟောက်နေတယ်။ အဲဒီလောက်အထိ မိန်းမနဲ့ကလေးတွေကို အပင်ပန်းခံပြီး ရှာဖွေကျွေးမွေးလာခဲ့တာပဲ။ နောက်တစ်ခုက အခု ဦးချစ်နောက်အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုရင်လည်း ဒါဖောက်ပြန်တာမှ မဟုတ်တာ။ တစ်ပင်လဲလို့တစ်ပင်ထူတာပဲ။ ကျွန်တော်တော့ အပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူး။ ဦးချစ် တွေ့ထားတာရှိလို့လား။”
“ငါတော့ မျက်စိထဲ မခင်တင့်ကို မြင်မိတာပဲ။ မောင်နိုင် မင်းကော ဘယ်လိုထင်သလဲ။”
“အဲဒါတော့ ဦးချစ်နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ အမြင်ခြင်းတူတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ ကျွန်တော်လည်း မခင်တင့်ကို ဦးချစ်နဲ့သဘောတူတယ်။ ဦးချစ်အနေနဲ့လည်း အဆင်ပြေပြေ ကိုယ့်လူရင်းထဲကပဲ အိမ်ထောင်ဖက်ရမယ်။ သူစိမ်းဆို သူ့အကြောင်း ကိုယ့်အကြောင်း မသိတာနဲ့၊ နောက်ကျွန်တော်တို့ ယောက္ခမကြီးဆုံးရင်လည်း အမွေကိစ္စတွေဘာတွေမှာ ဦးချစ်နဲ့ ကလေးတွေအတွက် အခက်အခဲမရှိတော့ဘူး။ ညီအစ်မအချင်းချင်းကိုး။ နောက်ကလေးတွေအတွက်လည်း သူစိမ်းမိထွေးဆိုတာထက်စာရင် အမေညီအစ်မအရင်း၊ ကိုယ့် အဒေါ်အရင်းပဲ။ သူစိမ်းထက်တော့ သာမှာပါ။ သူတို့ချင်းလည်း ပိုရင်းနှီးတာပေါ့။ နောက်ဦးချစ်သေရင်လည်း ကလေးတွေ အမွေကိစ္စတို့ဘာတို့က ပိုစိတ်ချရမယ်။ သူစိမ်းဆိုရင်တော့ ကလေးတွေရဖို့က မသေချာတော့ဘူး။ မခင်တင့်ဖက်က ကြည့်ရင်လည်း ဦးချစ်က မုဆိုးဖိုဆိုပေမယ့် မိသားစုအပေါ်ကောင်းတဲ့သူ၊ လင်ကောင်းသားကောင်းလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာလည်း အသင့်အတင့်ရှိတဲ့ သူပဲ။ ကျန်မိသားစုဖက်က ကြည့်တော့လည်း ကိုယ့်လူအချင်းချင်းဆိုတော့ သူစိမ်းဝင်မပါတော့ဘူးပေါ့။ အသိုက်အမြုံလည်း မပျက်တော့ဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်အပြောအဆိုလည်း သူစိမ်းကိုယူတာထက် စာရင်တော့ နည်းတာပေါ့။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဒီလိုအစ်မသေလို့ ညီမကိုဆက်ယူ တာတွေလည်း အများကြီးကို။ အားလုံးအဆင်ပြေမယ့်ကိစ္စပဲ ကျွန်တော်တော့ အားပေးပါတယ်။”
“အေးကွာ၊ ငါလည်း မခင်တင့်ကိုတော့ ဆောင်းပါးရိပ်ခြေပြောထားတယ်။ ဘယ်လိုတုံ့ပြန် မယ်တော့မသိသေးဘူး”
“အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့၊ ဦးချစ်ရယ်။”
မခင်တင့်တစ်ယောက် အလုပ်တွေရှုပ်နေတယ်။ အိပ်လို့တောင်မပျော်ဘူး။ နက်ဖြန်ခါကျရင် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားရင်း နဖူးပေါ်လက်တင်တော့ ပက်လက်၊ လက်ပေါ်နဖူးတင်တော့ မှောက်ရက်ဖြစ်လို့နေတယ်။ အစီအစဉ်တွေလည်း ခေါင်းထဲမှာ ပြည့်နှက်လို့နေတယ်။ နောက်ဆုံး မျက်စိကိုစုံမှိတ်ပြီး စိတ်နှလုံးဒုံးဒုံးချလို့ ငါကကောင်းစေချင်တဲ့စေတနာနဲ့ လုပ်တာပဲလို့ တွေးရင်းနဲ့ပဲ ညတစ်ညကို ကုန်ဆုံးစေလိုက်တယ်။
မနက်လည်းရောက်ကော မခင်တင့်က သူ့အမေကို ပြောတယ်။
“အမေ ဒီနေ့နေ့လည်ကျရင် ဦးချစ်မောင်အိမ်ကိုလာလိမ့်မယ်။ အမေသိတယ်မှတ်လား ဘာလို့လာတယ်ဆိုတာကို။ သူနဲ့ယူလိုက်ရင်၊ ကလေးတွေက သမီးကို မိထွေးခေါ်ကြမှာပေါ့။ သမီးအတွက်လည်း မကောင်းဘူး၊ ကလေးတွေအတွက်လည်း မကောင်းဘူး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း သမီးတို့ကို ဘယ်လိုပြောမလဲ။ အဲဒီတော့ အမေက ဦးချစ်မောင်လာလို့ သမီးကိုမေးရင် သမီးမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်၊ သမီးက အပေါ်ထပ်မှာပုန်းနေမယ်။”
ဒီလိုနဲ့နှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ ကိုရေချမ်းနဲ့ သူ့အမျိုးသမီးတို့ ကျွန်တော့်အိမ်ကို လာကြပါတယ်။ ဟိုအကြောင်းပြော၊ ဒီအကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်အိမ်မှာရှိတဲ့ အမေစိုက်ထားတဲ့ နှင်းဆီပန်းအိုးကိုတွေ့တာနဲ့ ကျွန်တော်က......
“ဒါအစ်ကိုကြီးအမေက အမေ့ကိုမျိုးခွဲပေးလိုက်တဲ့အပင်တွေလေ။ အသက်တွေသိပ် ကြီးလို့ ပန်းတောင်မပွင့်နိုင်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့်အမေက ငါ့အစ်မကြီးပေးသွားတဲ့အပင် တွေဆိုပြီး အမြတ်တနိုးနဲ့ ရေလောင်းပေးနေတုန်း”လို့ ပြောရင်းသူတို့ကို ပြရတယ်။
အစ်မက “ငါနဲ့နင့်အစ်ကို ရန်ဖြစ်ကြသေးတယ်”လို့ ပြောလို့ ကျွန်တော်က သူတို့ကိုပျော် စေချင်တာနဲ့
“အစ်မကလည်း ဖြစ်မှာပေါ့။ အစ်ကိုကြီးက အစ်မကို ချစ်လို့ယူတာမှ မဟုတ်တာ။ အ ဒေါ်ကြီးဗီဒိုထဲက သူ့အမေပစ္စည်းတစ်ခုတွေ့လိုက်ရင်း အဒေါ်ကြီးက နင်တို့ညီအစ်ကို မိန်းမယူရင် နင်တို့မိန်းမတွေကို ပေးမယ်လို့ ပြောလိုက်လို့ အဒေါ်ကြီးဆီက အမွေကိုလိုချင်တာနဲ့ မိန်းမရပြီးရောကွာဆိုပြီးတော့ အစ်မကို ယူလိုက်တာ”လို့ ဆိုတော့ အစ်မနှုတ်ခမ်းချက်ချင်း ဆူတက်လာတယ် ။ တကယ်ထင်သွားမှာစိုးလို့လည်း “စတာနော်အစ်မ”လို့ ကိုယ့်စကား ကိုယ်ပြန်ဖာရသေးတယ်။
“အေးကွာ၊ အမေ့ပစ္စည်းတွေမှာ ကျန်တာတော့မမက်ပါဘူး။ အမေ့နားကပ်ကလေးပဲ။” လို့ ကိုရေချမ်းက နှမြောတသသနဲ့ ပြောပါတယ်။ ဒီတော့မှအစ်မက အလန့်တကြားနဲ့
“အမလေး၊ မောင်ရယ်၊ နင့်အဒေါ်ပစ္စည်းတွေတော့ မယူပါရစေနဲ့။ တော်ကြာသူသေရင် မကျွတ်ပဲနဲ့ ငါတို့ကို လာခြောက်နေပါဦးမယ်။”
အစ်မက သတ္တိခဲပါ။ အိပ်ရင်တောင် တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့အသားနဲ့ ထိမနေရင် မ အိပ်တတ်ဘူး၊ ဗန္ဓုလသွေးပါတာပေါ့။
“ဒီလိုဆိုရင် အစ်ကိုကြီးရာ၊ ကြီးမေနားကပ် အဒေါ်ကြီးဆီမှာရှိသေးလားလို့ အဒေါ်ကြီး ကိုမေးလိုက်၊ မရှိရင်လည်းဆုံးပေါ့။ ရှိသေးတယ်ဆိုရင်တော့လည်း၊ အဲဒီနားကပ်ကို ရောင်းပြီး သုံးလိုက်တော့၊ သားတို့ညီအစ်ကိုက ကြီးမေအတွက်ရည်စူးပြီး အဒေါ်ကြီး ကိုလှူတယ်လို့ ပြောလိုက်။ သူလည်းအခုအဖွားလည်းမရှိတော့ အပျိုကြီးတစ်ယောက် တည်းနေနေရတာ။ တော်တော်လေး ငွေရေးကြေးရေးကျပ်တည်း နေတယ်ဆိုတော့။ သူသုံးချင်ရင်လည်းသုံးပေါ့။ မသုံးပဲနဲ့ ငါလှူမယ်ဆိုလည်း၊ အဒေါ်ကြီးအိမ်မှာပဲ ကြီးမေကိုရည်စူးပြီး ဘုန်းကြီးဆွမ်းကပ်လိုက်တာပေါ့။ နားကပ်ကလည်း မက်လောက်စရာမှမရှိတာ။ ကျောက်တွေဘာတွေထုတ်ပြီး ပြန်ရောက်လိုက်ရင်၊ အခုရွှေဈေးနဲ့ သုံးသိန်း ကျော်ကျော်ပေါ့။ ဘာတန်တာမှတ်လို့။ မဟုတ်ရင်သူလည်း သူများပစ္စည်း ခိုးတယ် တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ ဒါပေမယ့်လည်း ပိုင်ရှင်သဘောမတူပဲနဲ့ ယူတာဆိုတော့လည်း။ သူလည်း အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်။ အဲဒီတော့ဘာမဟုတ်တာနဲ့ ဇယားအရှုပ်မခံပဲနဲ့ အခုတည်းက ရှင်းလိုက်တာကောင်းတယ်။”လို့ ကျွန်တော်ကဝင်ပြီး ဆရာလုပ်တာနဲ့
“အေးကွာ၊ မင်းပြောတာမဆိုးပါဘူး၊ ငါကြည့်ပြီးစီစဉ်လိုက်ပါမယ်။ အဒေါ်ကြီးနဲ့အဖေနဲ့ ကိစ္စအဆင်ပြေသွားခဲ့ရင်လည်း ကောင်းသားကွာ။ ငါတို့လည်း သားအဖတွေ အခုလို တကွဲတပြားမဖြစ်တော့ဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လည်း သားအဖအချင်းချင်း စိတ်ဆိုးရတာ၊ ဒေါသထွက်ရတာတွေ မရှိတော့ဘူး။ အဖေလည်း ဟိုမိန်းမနှိပ်စက်တာ တွေ၊ အဲဒီမိန်းမနဲ့ရတဲ့ ပုစုခရုတွေကြောင့် စိတ်ညစ်ရတာတွေမရှိတော့ဘူး။ အခုကြတော့ ငါတို့အဖေလည်း အသက်ကြီးမှ ဒုက္ခရောက်နေရတယ်။ အခုဆို စံရိပ်ငြိမ်ကအိမ်လည်း ရောင်းလိုက်တော့ အမေနဲ့လက်ထပ်ပွားဆိုတာ မရှိတော့ပဲနဲ့ ငါတို့အတွက် မိဘအမွေအနှစ်ဆိုတာ မကျန်တော့ဘူး။ အဖွားဆုံးတုန်းကလည်း ငါတို့အတွက် ဘာမှမယ် မယ်ရရ မရလိုက်ဘူး။”လို့ အစ်ကိုကြီးကိုရေချမ်းက ငြီးငြီးငြူငြူနဲ့ပြောပါတယ်။
“ဒါတော့အစ်ကိုကြီးရယ် အဒေါ်ကြီးအနေနဲ့က ပြာလောက်ကိုတော့ နဖူးမှာဘယ်တို့ ထားချင်ပါ့မလဲ။”
Posted by mgyemin at 18:33 No comments:
Posted by mgyemin at 05:04 No comments:
۩ မိသားစု ۩
လမ်းဘေးက သူတောင်းစားလည်း အဖေ၊အမေ ရှိတယ် ။
အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ စင်္ကာပူက အိမ်ဖော်မလေးလည်း အဖေ၊အမေ ရှိတယ် ။
နယ်စပ်က ကွန်တ်ိမ်နာထဲ အသုဘ ဖြစ်သူတွေလည်း အဖေ၊အမေ ရှိတယ် ။
ဒူဘိုင်းမှာ အိမ်တွင်းပုန်းနေရတဲ့ မြန်မာမလေးလည်း အဖေ၊အမေ ရှိတယ် ။
ဆေးထိုး ကွပ်မျက်ခံရတဲ့ (စိုင်းနော်ခမ်း) လည်း အဖေ၊အမေ ရှိတယ် ။
Burma soldier (ကို) မျိုးမြင့်လည်း အဖေ၊အမေ ရှိတယ် ။
ကဗျာရေးတဲ့ (ဦး) တင်မိုးလည်း အဖေ၊အမေ ရှိတယ် ။
¶ နှုတ်မဆက်နဲ့ ငိုချင်တယ် ¶
လာရှိုးက (ကို) သိန်းအောင်လည်း အဖေ၊အမေ ရှိတယ် ။
ဝေနှင်းပွင့်သုန်လည်း အဖေ၊အမေ ရှိတယ် ။
တတိယနိုင်ငံသားတွေလည်း အဖေအမေ ရှိတယ် ။
သမ္မတကြီးလည်း အဖေ၊အမေ ရှိတယ် ။
အဖြူထဲက အမှောင်တွေအတွက် အလင်းတုတွေ ဖယ်ရှားပေးပါ ။
ဆာနေတဲ့ မိသားစုတွေအတွက် တံခါးချပ်တွေ ဖွင့်ထားပေးပါ ။
လွတ်နေတဲ့ ထမင်းဝိုင်းလေးက အရောင်မစုံတဲ့ ပန်းချီကားများ ။
ကျွန်တော်တို့ အိမ်ပြန်ချင်တယ် ။
Posted by mgyemin at 08:29 No comments:
ငယ်ငယ်က ရွတ်ဆိုသင်ခဲ့ရတာလေး သတိရမိ နေပါသည်။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကနေခဲ့သောမြို့လေးတွင်သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲ၊ဈေးတန်းလမ်းလျှောက်ရသည်
မှာ ပျော်စရာကောင်း၏။ လမ်းမကြီး ဝဲယာတလျှောက်တွင် ဝါးလုံးတိုင်များ စိုက်ပြီး ကြိုးတန်းထား၏။ ကြိုးတန်းတလျှောက်၌ကား … ရောင်စုံမီးပုံများ အစီအရီ ထွန်းထားကြသည်။ လမ်းဆုံလမ်းခွများတွင်မူ မုဒ်ဦးကြီးများနှင့် ….။ မီးရောင်စုံ …။ မီးပုံး ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနှင့် …..။
နေမကျခင်ကတည်းမှ ကျွန်တော်တို့ ကလေးတသိုက် ဂွေလိမ့်ရင်း မြို့ထဲလမ်းမကြီးတလျှောက် လမ်းသလားထားကြပြီးဖြစ်၏…။ဈေးထိပ်ကွက်လပ်ကြီးတွင်က….အငြိမ့်…။တံတားထိပ်ကားဂိတ်မှာက …. စတိတ်ရှိုး …။ စသည် …. စသည်ဖြင့် …. ကျွန်တော်တို့ သတင်းရထားကြပြီ။ မီးရောင်စုံ ရွှန်းလက်သောည။ ကြည့်စရာပွဲများကလည်း စုံသည်။ အငြိမ့် ….။ ဇာတ်…။ စတိတ်ရှိုး….။ စင်တင်တေးသရုပ်ဖော် …..။ စုံ၏။ ညဦးပိုင်းရောက်တော့ အဖေနဲ့အမေက ကျွန်တော်လက်ကို ဆွဲပြီး မီးရောင်စုံတွေ ထွန်းလင်းနေတဲ့ ပွဲဈေးတန်းသို့ လိုက်ပို့ပါသည်။ ထိုကာလ၏ အပျော် …….
ယခု လူလတ်ပိုင်းအရွယ် ရေခြား မြေခြားမှာ ဒီအချိ်န် ဒီကာလ ……… စိတ်ထဲ အလိုလို ကြည်နူးရပြန်သည်။ ၀ါလကင်းလွတ် သီတင်းကျွတ် အချိန်အခါ ရောက်ရှိလို့ လာပြန်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တိုင်းနိုင်ငံသီးသီး၌ ထူးခြား၊ထင်ရှားသည့်ပွဲတော်များရှိကြလေသည်။ ဤပွဲတော်များသည် တိုင်းနိုင်ငံပေါ်၌ မှီတင်းနေထိုင်ကြကုန်သော လူမျိုးများ၏ ယုံကြည်မှု၊ စိတ်ခံစားချက်များကို လွမ်းမိုးသော ဓလေ့များနှင့်အတူ ဖော်ပြ ကျင်းပကြလေသည်။ ထိုဓလေ့များသည် ထိုလူမျိုးများ၏ အကျင့်စာရိတ္တ၊ ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်း၊ တန်ဖိုးထားမှုတို့ဖြင့် ထင်ဟပ်နေလေရာ ထိုပွဲတော်များသည် ထိုလူမျိုးတို့အတွက် အသက်တမျှ တန်ဖိုးကြီးလေသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တိုင်းနိုင်ငံများထဲမှ အရှေ့ တောင်အာရှတွင်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံသည် THE COUNTRY OF FESTIVALS ဟု ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထင်ရှား ကျော်ကြားလေသည်။
သီတင်းကျွတ်လသည် မြန်မာတို့ ၏ (၁၂) လရာသီတွင် သတ္တမမြောက်လဖြစ်ပြီး ၀ါတွင်းကာလ၏ နောက်ဆုံးလဖြစ်ပါသည် ။ ရာသီခွင်မှာ တူရာသီ ဖြစ်ပြီး အဿဝတီ ကြယ်နှင့် လမင်းတို့ စန်းယှဉ်ကာ မွန်းတည့်ကြသည် ။ ရာသီပန်းမှာ ကြာဖြူပန်း ( Nymphaea Lotus ) ဖြစ်ပါသည် ။ သီတင်းကျွတ်လကို ရှေးမြန်မာကျောက်စာများ၌ `သန္တူလ´ ဟုရေးထိုးကြသည် ကိုတွေ့ရပါသည်။ ချိန်ခွင်ပုံ ကြယ်တာရာ နက္ခတ်တို့စုဝေးသော မိုးကာလဟု လည်းကောင်း ၊ တောင်သူလယ်သမားတို့ စိုက်ပျိုးထားသောစပါးပင်များ သန်စွမ်းစွာ ထောင်မတ်သောလဟု လည်းကောင်း ပညာရှိများ ဖွင့်ဆိုကြပါသည်။ မိုးရာသီ ကုန်ဆုံးလုနီး၍ မိုးအားနည်းလာသည်။
ရှေးလူကြီးတို့က သီတင်းကျွတ်တွင် “ ပလ္လင်ဆေးမိုး ရွာသွန်းဖြိုး ” ဟု ဆိုကြသည်။ အဓိပ္ပါယ်
က တစ်ဝါတွင်းလုံး ဘုရားဆွမ်းတော် တင်လာသည့် ပလ္လင်ကို သီတင်းကျွတ်မိုးက နှုတ်ဆတ်
ရွာသွန်းကာ ဆေးကြောပေးသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
မြန်မာတို့ သည့် စိတ်ရင်းရိုးသား တည်ကြည်ကြသူများ ဖြစ်သည်နှင့်အညီစစ်မှန်သော ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုပုဂံခေတ် အနော်ရထာမင်းတရားနှင့်ရှင်အရဟံ မထေရ်မြတ်တို့၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ခွင့် ရကြပြန်သောအခါ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ အဆုံးအမ တရားတော်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာ အေးချမ်းပျော်ရွှင်ဖွယ် ကောင်းသော လူနေမှုဘ၀များဖြင့် လောကဓံတရားများကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်သော၊ရောင့်ရဲ တင်းတိမ်တတ်သော စိတ်နှလုံးကိုခေတ်အဆက်ဆက် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူများ ဖြစ်ကြပါသည် ။ ဤစိတ်ဓာတ်များ အရင်းခံဖြင့် (၁၂) လရာသီရှိသည့်အနက် အခါကြီး၊ ရက်ကြီးနေ့များတွင် ရတနာသုံးပါးအား ရည်စူး၍ ကောင်းမှုကုသိုလ်များ ပြုလုပ်လေ့ရှိကြပါသည် ။
သီတင်းကျွတ် မီးထွန်းပွဲတော်သည် မြန်မာတို့၏ (၁၂) လရာသီ ပွဲတော်များတွင် ထင်ရှားသောပွဲတော် တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပွဲတော်စတင်ကျင်းပခဲ့သည့် အစဉ်အလာမှာဘုရားရှင် သက်တော်ထင်ရှား ရှိခဲ့စဉ်အခါကပင် ဖြစ်ပါသည် ။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်သည် သတ္တမမြောက်ဝါကို တာဝတိံသာ နတ်ပြည်၌ ၀ါကပ်တော်မူပြီး မယ်တော်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသောသန္တုဿီတ နတ်သားအား အမှုးပြု၍ စကြ၀ဠာနေရာ အနှံ့ မှ နတ်ဗြဟ္မာ အပေါင်းတို့ အား အဘိဓမ္မာတရားတော်မြတ်ကို ဟောကြားတော်မူသည် ။သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ရောက်သောအခါ ဘုရားရှင်သည် နတ်ဗြဟ္မာ အပေါင်းခြံရံကာ ရွှေစောင်းတန်း ၊ ငွေစောင်းတန်း ၊ပတ္တမြားစောင်းတန်းများဖြင့် စီခြယ်အပ်သော ရတနာစောင်းတန်းဖြင့် လူ့ ပြည်ဖြစ်သော သင်္ကဿနဂိုရ်ပြည်သို့ ပြန်လည်ဆင်းသက်ကြွမြန်းတော်မူသည် ။
ထိုအခါ သမယတွင် ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့က မီးရှူးမီးတိုင်များ ၊မီးပန်းများ၊ ဆီမီးများ ပန်း၊ ရေချမ်းများဖြင့် ကပ်လှူပူဇော်ကြသည် ။
တာဝတိံသာနတ်ပြည်ရှိ စူဠာမဏိစေတီတော် ကိုလည်း ပူဇော်သည့် အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် မီးပုံးများပြုလုပ်၍ ကောင်းကင်သို့ လွှတ်တင် ပူဇော်ကြသည် ။ထိုကဲ့သို့ ပူဇော်ကြသည်ကို အကြောင်းပြုကာ ယနေ့ ခေတ်အခါတိုင်အောင်မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး၌ နှစ်စဉ်ကျင်းပ ပြုလုပ်မြဲ ဖြစ်သည် ။
သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့တွင် ပုရိမ၀ါမှ ထမြောက်ကြသော သံဃာတော်အရှင်မြတ်များ သည် မိမိတို့အချင်းချင်း အပြစ်ကြီးငယ်ရှိပါက သည်းခံခွင့်လွတ်ရန်၊ လမ်းမှန်ကိုညွန်ပြရန်၊ သွန်သင်ဆုံးမရန် တောင်းပန်ကြပြီး ပ၀ါရဏာ ပြုကြပါသည်။ထို့ကြောင့် သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့ကို ပ၀ါရဏာနေ့ဟုလည်း ခေါ်ကြပါသည်။
ထို့အတူ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမ၌ တည်ကြသော မြန်မာလူမျိုးတို့သည်လည်း မိမိထက်အသက် ဂုဏ်ဝါကြီးသူ၊မြင့်မြတ်သူ၊ ရိုသေလေးစားထိုက်သူတို့အပေါ် အပြစ်ကြီးငယ်များရှိပါက သည်းခံခွင့်လွတ်ကြရန် ငယ်သူ ၊ နိမ့်ကျသူတို့က ပူဇော်ကန်တော့လေ့ ရှိကြသည်။
ထို့ပြင် ဤထူးမြတ်သော ၀ါကျွတ်သော အချိန် အခါသမယတွင် မိမိတို့တတ်နိုင်သမျှ ပူဇော် သက္ကာရတို့ ဖြင့် သက်ကြီးဝါကြီးများ ၊ မိဘဆရာများကို ပူဇော်ကန်တော့လေ့ရှိကြ၏ ။ထို့ကြောင့် ၀ါကျွတ်ကာလသည် မြန်မာတို၏တစ်ဦးကို တစ်ဦး ရိုသေလေးစားတတ်သော သဘော ၊မာန်မာနကို နှိမ့်ချတတ်သော သဘော၊အပြန်အလှန် မေတ္တာစေတနာ ထားတတ်သောသဘော စသည်ဖြင့် အမျိုးကောင်း သားသမီးတို့၏ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သော စိတ်နေစရိုက် ကိုဖော်ကျူး ပြသနေသော အမျိုးဂုဏ်ကို မြှင့်တင်ပေးနေသည့် အချိန်အခါ ဖြစ်ပါသည်၊၊ သို့ဖြစ်ရာ မြန်မာပြည်သူ/သားများ အားလုံး
သူတော်ထုံး တို့ ဖြင့် သီတင်းကျွတ် မီးထွန်းပွဲတော်ကို ပျော်ရွှင်စွာ ပါဝင်ဆင်နွဲ နိုင်ကြပါစေ..ဟု ဆန္ဒပြုလိုက်ပါသည်။ ။
ဖော်ပြပါကဲ့သို့ သီတင်းကျွတ်ကာလ၏ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့.သာယာပုံကို ရှေးစာဆိုတစ်ဦး၏ ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြင့် နိဂုံးချုပ်လိုက်ရပါသည်။
အိုင်မင်းရေကြည်က .. ၊
ကြာငါးမည် ငုံအာစွင့်တယ်.. ၊
ဖူးပွင့်ချိန်ခါ .. ။
အဿဝဏီ ယှဉ်ကာချဉ်းပါလို့ .. ၊
မစဲပေါင် ကုသိုလ်နှိုးကြတယ် .. ၊
ကိုးကား - အရှင်သံဝရာလင်္ကာရ
Posted by mgyemin at 07:26 No comments:
အဖေ သီးပွင့်ခဲ့တာ ကျွန်တော့် ရင်ထဲ စိုက်ပျိုးခြင်း တစ်မျိုး
အငုံးစိတ်က ကျွန်တော့် အာကာဝတ်ရုံတွေ ချွတ်လို့
အဖေ …. ရိုးသားပါ
ကျွန်တော့် ညီမလေး ဘယ်မှာလဲ ။ ။
Posted by mgyemin at 07:14 No comments:
Posted by mgyemin at 07:11 No comments:
ရသ ( 1 ) (1)
မွေးနေ့ဆုတောင်း ကဗျာ (4)